Tottenham Oo Wembley Stadium Ku Dubatay Real Madrid Si Ay Wareega 16ka Kooxood Ee UCL Ugu Soo Baxdo, Dele Alli Oo Laba Gool Dhaliyay Iyo Spurs Oo Guusheedii Abid Ugu Horaysay Ka Gaadhay Los Blancos. – WWW.Gool24.net
Tottenham Oo Wembley Stadium Ku Dubatay Real Madrid Si Ay Wareega 16ka Kooxood Ee UCL Ugu Soo Baxdo, Dele Alli Oo Laba Gool Dhaliyay Iyo Spurs Oo Guusheedii Abid Ugu Horaysay Ka Gaadhay Los Blancos.
Tottenham ayaa Wembley Stadium ku dubatay kooxda koobka kooxaha Yurub ee Champions Leaque difaacanaysa ee Real Madrid iyada oo Delle Alli uu laba gool kulan indhaha aduunka ku xaday kadib markii uu ganaax ka soo laabtay. Christian Eriksen ayaa goolka saddexaad raacsaday halka Cristiano Ronaldo uu xili danbe Madrid u keenay goolka calanka.Tottenham ayaa u soo baxday wareega 16 ka kooxood ee Champions Leaque.
Waa guushii abid ugu horaysay ee ay Tottenham ka gaadhay Real Madrid waxayna sidoo kale Spurs gaadhay guusheedii abid ugu horaysay ee garoonkeeda guul kaga gaadho kooxda ree Spain ah. Tottenham ayaa hogaanka u qabtay Group H iyada oo Real Madrid kaalinta labaad iskaga riixday. Waa guuldaradii labaad ee usbuucan soo gaadhay Real Madrid waxayna xaalad adag ku sii abuuraysaa Zidane iyo kooxdiisa Los Blancos.
Tottenham ayaa qaybtii hore ee ciyarta soo bandhigtay qaab ciyaareed aad u fiican iyada oo kulankan ku bilaabtay dardar xoogan waxaana Spurs faa’iido wayn iyo niyad dhis wayn u abuurayay in Harry Kane uu kulankan soo laabtay halka Dele Alli uu isna ka soo laabtay ganaax uu ku seegay kulamadii kooxaha Yurub ee la soo ciyaaray.
Real Madrid ayaan ku bilaaban qaab ciyaareedkii laga filayay inkasta oo uu Zidane ka dalbaday in ay jawaab ka bixiyaan guuldaradii horyaalka La Liga kaga soo gaadhay kooxda Girona. Los Blancos iyo Tottenham ayaa kulankan ciyaarayay iyaga oo u tartamaya hogaanka Groupkooda.
DAQIIQADII 24 AAD Tottenham ayaa xili hore qasab ku noqotay in ay shaxdooda isbadal ku sameeyaan kadib markii uu dhaawac soo gaadhay Alderweireld waxaana kaydka looga yeedhay Moussa Sissoko. Laakiin isbadalka qasabka ku noqday Spurs ayaan waxba dardartooda hoos udhigay waxayna sii wateen fursadaha ay goolka furitaanka ku raadinayeen.
DAQIIQADII 27 AAD Tottenham ayaa ugu danbayn heshay goolkeeda furitaanka waxaana waqtigii uu ganaaxa ku maqnaa ka soo kabsatay Dele Alli oo si qurux badan kubbada ugu dhamaystiray goolka Real Madrid isaga oo Nacho iyo goolhaye Casilla ka dhex boobay waxaana caawinta goolkan sameeyay Kieran Trippier oo offside ku jiray waxayna ciyaartu noqotay 1-0 ay Tottenham hogaanka kula wareegtay.
Waxaa wax lala yaabo noqotay in hal ciyaartoy oo kooxda Real Madrid ahi aanu garsooraha ama calanwadaha u sheegin in Kieran Trippier oo kubbada u soo karoosay Dele Alli uu ofside ku jiray taas oo keentay in Tottenham ay heshay goolka ay ku taamaysay.
DAQIIQADII 30 AAD Casemiro ayaa shaqa fiican kubbada ku qabtay isaga oo si fiican iskaga baneeyay Kieran Trippier ka hor intii aanu darbo ku tuurin goolka Tottenham laakiin goolhaye Hugo Lloris ayaa badbaadin fiican sameyey si uu kooxdiisa Spurs hogaanka ugu sii ilaaliyo.
DAQIIQADII 32 AAD Cristiano Ronaldo ayaa markiisa darbo la beegsaday goolka Tottenham si uu u raadiyo goolka barbaraha laakiin markan goolhaye Llorris ayaa kubbada koorne iskaga saaray waxayna Real Madrid bilawday in ay goolka barbaraha si xoogan u raadiso.
Real Madrid ayaa qaybtii hore ee ciyaarta samaysay 5 darbo oo ay goolka Tottenham ku toogtay laakiin waxay awoodi wayday in ay hal gool ku dhaliso halka Tottenham ay 4 darbo ku bartilmaameedsatay goolka Madrid waxayna ku dhalisay hal gool waxaana qaybtii hore lagu kala nastay 1-0 ay Tottenham hogaanka ciyaarta ku haysay.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii danbe ee ciyaarta ayay Real Madrid doonaysay in ay ka soo kabsato goolkii hogaanka looga hayay qaybtii hore ee ciyaarta laakiin Tottenham oo dardar fiican ku jirtay ayaa doonaysay in ay raadiso goolka labaad ee ciyaarta.
DAQIIQADII 56 AAD Tottenham ayaa la timid goolkeeda labaad laakiin waxaa cajiib noqotay in Dele Alli uu markale helay banaan uu si buuxda kubbada ugu maamushay isaga oo Casemiro ka awood batay ka hor intii aanu darbo ku ganin goolka Madrid waxayna kubbadu ku sii dhacday Ramos iyada oo sidaa ku gashay goolka Casilla uu waardiyahay ka ahaa waxayna ciyaartu noqotay 2-0 ay Tottenham hogaanka ciyaarta ugu qabtay.
Dele Alli ayaa muujiyay wixii uu kooxdiisa kala maqnaa intii uu ganaaxa ku jiray waxayna Real Madrid u muuqatay mid wali la dhibtoonaysa xaaladii difaac xumada ahayd ee ay ku soo jirtay iyada oo aan sidoo kale ahayn kooxdii cabsida badan ku abuuri jirtay kooxaha ay la ciyaarayso.
DAQIIQADII 65 AAD Tottenham ayaa qof kasta ka yaabsatay markii ay heshay goolkeeda saddexaad waxaana Zidane iyo kooxdiisa niyadjabka u sii laba jibaaray Christian Eriksen kaas oo si fiican uga faa’iideeyay kubbad caawin uu ka helay Harry Kane waxayna markan ciyaartu noqotay 3-0 ay Tottenham ku dubanayso kooxda Champions Leauqe difacanaysa ee Rea Madrid oo si buuxda iskugu dhex yaacday.
Markale Dele Alli ayaa kubbada ku soo lug lahaa laakiin ma rumaysan kartid in Christian Eriksen uu goolkiisii ugu horeeyay ee Champions Leaque uu kulankan ka dhaliyay muddo shan sano ah, waxayna markan Real Madrid oo doonasyay in ay soo laabtay ay xaaladu ku noqotay mid cakiran.
Zidane ayaa iyada oo 3-0 kooxdiisa hogaanka looga hayo wali aan wax badal ah samayn waxayna Tottenham u muuqatay mid si wayn ugu raaxaysanaysa ciyaarta laakiin Spurs ayaa wali cabsi ka qabtay in ay qaladaad u sameeyaan Los Blancos.
DAQIQIADII 72 AAD Zidane ayaa ugu danbayn laba badal hal mar isa soo raaciyay wuxuuna kaydka uga yeedhay Marco Asensio iyo Moyoral wuxuuna ciyaarta ka saaray wuxuuna ciyaarta ka saaray Karim Benzema iyo Isco oo ku fashilmay in ay door muuqda ciyaarta ku yeeshaan si la mid ah xidigo badan oo Madrid garoonka ugu jiray.
DAQIIQADII 79 AAD Real Madrid ayaa ugu danbayn gaadhay shabaqa Tottenham waxaana kubbad darbo xoogan oo aan la joojin karin goolka Spurs ku tuuray Cristiano Ronaldo waxayna kubbadu ku sii dhacday Dier iyada oo Hugo Lloris uu markan awoodi waayay in uu wax ka qabto goolka Ronaldo waxayna ciyaartu noqotay 3-1 ay wali Tottenham hogaanka ciyaarta ku hayso.
Laakiin goolkan ayaa u muuqday mid ruuxda dib ugu soo celiyay Real Madrid iyada oo badalka uu sameeyay Zidane ee uu la soo daahay uu ciyaarta isbadal ku sameeyay waxayna markiiba Madrid bilawday in ay goolal kale raadiso si ay waqtiga kooban ee u hadhsanaa uga faa’iidaysato.
Real Madrid ayaa markan bilawday in ay cadaadis saarto difaaca Tottenham ee inta badan kulankan aan dhibtii weerarka Madrid soo arag laakiin Tottenham ayaan wax qalad ah ka samayn hogaanka ay labada gool ku haysay waxayna ugu danbayn ciyaartu ku dhamaatay 3-1 ay Tottenham ku soo dubatay Real Madrid.